Migraine amin'ny ankizy sy ny tanora | Bezzia
Maria Jose Roldan | 23/07/2021 22:07 | Reny torohevitra
Ny data dia manondro fa ny migraine no karazana aretin'andoha mahazatra indrindra amin'ny planeta iray manontolo. Raha ny ankizy sy ny adolantsento dia saika ny 75% amin'izy ireo dia miaina migraine amin'ny fotoana sasany amin'ny fiainany.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hiresaka momba ny soritr'aretina migraine mahazatra indrindra amin'ny ankizy sy ny tanora ary inona no tokony hataon'ny ray aman-dreny hanamaivanana ny soritr'aretina toy izany.
1 Fambara ny migraine
2 Amin'ny firy taona ny ankizy no mety manomboka migraines?
3 Ny famaritana migraines amin'ny ankizy
4 Ahoana ny fomba hiatrehana migraines amin'ny ankizy
Fambara ny migraine
Misy fambara maromaro izay manampy amin'ny fanavahana ny migraine amin'ny karazana aretin'andoha hafa:
Mipoitra ny migraine tampoka ary tampoka teo.
Matetika ny fanaintainana dia misy fiantraikany amin'ny ampahany amin'ny loha matetika, na dia mety hitranga koa eo amin'ny handrin'ny zaza manontolo io.
Ny fanaintainana mafy matetika dia miaraka amin'ny fandoavana sy ny fisaleboleboana.
Vao mainka mihamafy ny fanaintainan'ny lohanao miaraka amin'ny hazavana sy feo maromaro.
Miverina matetika ny migraine rehefa mandeha ny fotoana miaraka amin'ny lehibe kokoa na kely ny hamafiny.
Matetika ny ankizy dia manana karazana na kilasin'ny migraine izay malaza amin'ny anarana hoe migraine misy aura. Amin'ity karazana migraine ity, alohan'ny aretin'andoha, ny zaza dia manana andianà soritr'aretina hafa toy ny havizanana mafy na fahitana manjavozavo. Na dia tsy mitovy aza ny migraine tsirairay, ara-dalàna raha maharitra anelanelan'ny 4 ora sy 3 andro izy ireo.
Amin'ny firy taona ny ankizy no mety manomboka migraines?
Ny zavatra mahazatra dia ny fizarana migraine manomboka amin'ny 7 na 8 taona. Tena tsy fahita firy amin'ny zaza kely ny mahatsapa aretin'andoha mafy sy mafy. Ny migraine dia mety hitranga amin'ny zazalahy sy zazavavy tsy fantatra.
Ny famaritana migraines amin'ny ankizy
Maherin'ny antsasaky ny ankizy mijaly amin'ny migraines matetika dia manana havana akaiky izay matetika mijaly amin'izy ireo. Zava-dehibe izany rehefa manao diagnostika tsara. Miaraka amin'ny fizahana ara-batana tsotra sy fahalalana ny tantara, ny dokotera dia matetika no marina rehefa mamantatra migraine.
Ahoana ny fomba hiatrehana migraines amin'ny ankizy
Betsaka ny tranga mety hampidi-doza mety hanondro ny antony mahatonga ny kely hijaly amin'ny aretin'andoha toy ny migraine:
Ny fihinanana sakafo sasany toy ny sôkôla na fromazy. Raha ny adolantsento, ny fihinanana zava-pisotro misy alikaola tsy tapaka koa dia mety ho ny aretin'andoha migraine.
Fiainana manahirana loatra.
Fiovana hormonina mijaly ny tanora hahatratra ny fahatanorana
Torimaso ratsy ary tsy fahampian'ny torimaso.
Raha tsikaritry ny ray aman-dreny fa marary migraine ny zanany dia zava-dehibe ny fanampiana azy ireo hiala sasatra amin'ny tontolo tsy misy hazavana na tabataba. Mety hitranga fa ny torimaso dia manampy ny migraine hiala. Raha tsikaritrareo fa na eo aza ny sisa, tsy mahavita ny migraine, dia afaka manolotra paracetamol ianao hanalefahana ny fanaintainana mafy. Raha na eo aza ny zava-drehetra dia mbola tsy manjavona ny migraine, zava-dehibe ny fitondrana ny zaza any amin'ny dokotera hanomboka fitsaboana sahaza azy toy ny prophylaxis.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » Reny torohevitra » Migraine amin'ny ankizy sy ny tanora
Ahoana no fomba hamoronana fitafiana kapsily maharitra
Dobo voajanahary ao amin'ny zaridaina: safidy tsy fahita firy